Ilhaan Cumar oo dil loogu hanjabay! - Muqdisho Online
Home News Ilhaan Cumar oo dil loogu hanjabay!
Ilhaan Cumar oo dil loogu hanjabay!
Previous articleMas’uuliyiin cusub oo loo magacaabay Magalada Marko!!
Next articleMadaxweyne Deni oo DP-World oo heshiis cusub galay (Aqriso)
Howlgal laga sameeyay Afgooye kadib Dil halkaa ka dhacay
Ciidamo katirsan booliska Soomaaliya ayaa waxaa ay saacadihii la soo dhaafay howlgal dad lagu qabqabtay ka sameeyeen xaafado katirsan degmada Afgooye ee Gobolka Shabeellaha...